Flim2MM: 2016
စိတ္တဇဆးရုံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဒေါက်တာ မရန်ဒါဟာ မိုးရွာတဲ့ညတညက ထူးဆန်းမှုတခုကြုံခဲ့ပြီး သူသတိပြည်လည်လာတဲ့အချိန်မှာ သူအလုပ်လုပ်တဲ့ ဆေးရုံမှာ လူနာအဖြစ်ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ၊ ဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတာကို သူကိုယ်တိုင်မမှတ်မိပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်...
သဲထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားကောင်းတလက်ဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Halle Berry, Penélope Cruz နဲ့ Iron Man မင်းသား Robert Downey Jr. တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးတော့ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဇာတ်လမ်းအဆုံးအထိ ဆွဲခေါ်သွားမယ့်ဇာတ်လမ်းပါ။
[FORMAT]:………………………….:[ 720p DVDRip MP4
[RESOLUTION]:………………….:[ 720 x 480
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[ 1h 38mins
Posted by Y Junction at 12:44:00 AM No comments:
အာနဝါရဲ့မသားစုဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ ဖေါက်ခွဲမှုတခုမှာ အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်နောက်ပိုင်းမှာ အာနဝါဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အားမကိုးပဲ နောက်ကွယ်ကကြိုးကိုင်သူနဲ့ အမှန်တရားကိုရှာဖွေပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ပါတ်သတ်သူတွေကို သက်ညှာမှုမပေးတော့ပဲ သတ်ပစ်ပါတော့တယ်။
[FILE SIZE]:……………………….:[ 954 MB
[RESOLUTION]:………………….:[ 720 x 380
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[ 1h 54mins
Posted by Y Junction at 11:58:00 AM2comments:
သာယာတဲ့မိသားစုတစုဖြစ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာ ရာအူးတို့ မိသားစုဟာ ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားတဲ့ မတုရာနယ်ကို တာဝန်အရ ပြောင်းရွှေ့လာပါတယ်။ အဲ့ဒီနယ်မှာ အစ်ကိုဖြစ်တဲ့ တရားစီရင်ရေးလူကြီးမျက်နှာနဲ့ ရမ်းချင်တိုင်းရမ်းနေတဲ့ ရာဟဗ်ဆိုတဲ့ လူဆိုးကို လူတွေက ကြောက်ရွံ့ရပါတယ်။ ရာအူးရဲ့ ဇနီးချောလေး ပရီယာကိုမြင်မြင်ချင်း တက်မက်သွားတဲ့ ရာဟဗ်ဟာ ရာအူးနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ မိသားစုတစုလုံးကို ဘယ်လိုတွေအန္ဒရာယ်ပေးပြီး အေးဆေးတဲ့ သာမာန်အင်ဂျင်နီယာ ရာအူးအနေနဲ့ ဘယ်လိုကြောင့်ဒေါသတွေ ပေါက်ကွဲသွားမလဲဆိုတာကိုတော့....
မွေးနေ့ အမှတ်တရအနေနဲ့ တောင်းဆိုနေကြတဲ့ hindi ဇာတ်လမ်းတပုဒ် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ Have Fun...
[FORMAT]:………………………….:[ 720p HDRip MP4
[FILE SIZE]:……………………….:[ 380 MB
[RESOLUTION]:………………….:[ 720 x 304
[Translate By]:……………………..:[ r@bp!G
Posted by Y Junction at 2:03:00 AM No comments:
ဂျက်ကီချန်းဇာတ်ကား AOG ကို မောင်ဦးမှ ထပ်မံဘာသာပြန်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဂျက်ကီချန်းကားြ့ဖစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် စွန့်စားခန်းနဲ့ ဟာသတွေကို မပျင်းမရိကြည့်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
[GENRE]:………………………… .:[ Comedy, Action, Adventure
[FILE SIZE]:……………………….:[ 720 MB
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[ 1h 28mins
Posted by Y Junction at 12:09:00 AM4comments:
ကလေးလူကြီးအကုန်လုံးကြိုက်တဲ့ ဂျက်ကီချန်းကားကောင်းတလက်ဖြစ်တဲ့ Project A2မှာ ဂျက်ကီချန်း ကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်ထိ ကြည့်လို့ကောင်းနေဆဲ IMDB rating များတဲ့ဇာတ်ကားတကားပါ။ ဒီဇာတ်ကားကို ဂျက်ကီချန်းခရေဇီ မောင်ဦး မှ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဘာသာပြန်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ စစ်ဘက်က ဆာဂျင်မာယူလုံ (ဂျက်ကီချန်း)ဟာ စိုင်းဝမ်မြို့လေးမှာ ရဲအုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ ရောက်ရှိသွားချိန်မှာတော ဒီမြို့လေးအတွက် ဖြေရှင်းပေးရမယ့်ပြသနာတွေ မနည်းမနောရှိနေပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ မြို့ခံလူဆိုးဂိုဏ်ဖြစ်ပြီး သူတို့နဲ့ပါတ်သတ်နေတာကတော့ လာဘ်စားနေတဲ့ ရဲတွေဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ပင်လယ်ဓါးပြဟောင်းတွေ ၊ မန်ချူးအစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားသူတွေနဲ့လည်း နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါတ်သတ်ရပြီး မာယူလံအနေနဲ့ နောက်ဆုံး ဒုစရိုက်တွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားလဲဆိုတာကိုတော့....
ဂျက်ကီးချန်းထုံးစံအတိုင်း ဖိုက်တင်ခန်းတွေကို ရယ်ရယ်မောမောကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပြီး translator ဖြစ်တဲ့ မောင်ဦးကိုလည်း ဂျက်ကီချန်းဇာတ်ကားတွေ ထပ်မံတောင်းဆိုနိုင်ပါကြောင်း....
[GENRE]:………………………… .:[ Comedy, Action, Crime
[FILE SIZE]:……………………….:[ 864 MB
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[ 1h 41mins
LProject A2(1987)
Posted by Y Junction at 10:30:00 PM7comments:
နယူးယောက်မြို့ ဘဏ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလုပ်မှာ အလုပ်ကောင်းရထားတဲ့ ဂျော့ခ်ျဟာ သူ့ရဲ့သူဋ္ဌေး အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ ကလပ်ပိုင်ရှင် သူ့အစ်ကို ပေါလ်ဆီကို အလည်အပါတ်သွားဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကိုရောက်ပြီးမှပဲ ဘန်ကောက်ကသြဇာကြီးတဲ့ မာဖီးယားဂိုဏ်နဲ့ သူ့ရဲ့သူဋ္ဌေး၊ သူ့အစ်ကိုပေါလ်တို့ဖြစ်တဲ့ ပြသနာတခုမှာ သူကကြားညှပ်ဆိုတာကိုသိပေမယ့် နောက်ကျသွားပါပြီ၊ မာဖီးယားတွေရဲ့လက်က လွတ်အောင်ဘယ်လိုတွေလုပ်ဆောင်မလဲ၊ ရဲတွေနဲ့ဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတာကိုတော့.....
[FILE SIZE]:……………………….:[ 810 MB
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[ 1h 23mins
Posted by Y Junction at 8:21:00 AM 1 comment:
Posted by Y Junction at 6:30:00 AM 1 comment:
တလောက facebook သုံးတဲ့သူတွေ နယ်ဆင်မင်ဒဲလားနဲ့ မော်ဂန်ဖရီးမန်းဓါတ်ပုံတွေမှာပြီးတင်ကြတာမှတ်မိသေးတယ်။ မှားမယ်ဆိုလည်းမှားလောက်စရာပဲလေ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဖရီးမန်းက မင်ဒဲလားနေရာမှာ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သရုပ်ဆောင်သွားတာကိုး၊ ဒီဇာတ်ကားထဲက မော်ရန်ဖရီးမန်းရော မက်ဒေါမွန်ရော အင်္ဂလိပ်စကားကို အာဖရီကန်လေသံအတိုင်းပြောကြတော့ တလောကရုံတင်တဲ့ဇာတ်ကားထဲက အောင်ရဲလင်း တောသံပြောတာကိုလည်း သွားသတိရမိပါသေးတယ်ဗျား...
Invictus ဇာတ်ကားဟာ ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခွင့်ရခဲ့တဲ့ တောင်အာဖရိကနို င်ငံကို ဂုဏ်ပြုပြီး ထွက်ရှိလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်အာဖရိက သမ္မတဟောင်း နဲလ်ဆင်မင်ဒဲလားရဲ့ သမ္မတဖြစ်ပြီးစအချိန် နိုင်ငံအတွက် ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကို အသားပေး ဖော်ပြထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ မင်ဒဲလား ထောင်ကနေလွတ်ပြီး တောင်အာဖရိကသမ္မတစတင်တာဝန်ယူစဉ်က နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့နဲ့ လူဖြူလူမဲပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အားကစားကိုမြှင့်တင်ပြီး ကောင်းကောင်းအသုံးချသွားပုံကို ရိုက်ကူးထားပါတယ်။မင်ဒဲ လားရဲ့စိတ်ဓာတ်၊ နိုင်ငံရေးနဲ့အားကစား ရောယှက်မှု စတာတွေကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ မင်ဒဲလားအနေနဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဝေဖန်မှု တွေရှိနေတဲ့ ကြားက၁၉၉၅ခုနှစ် အချိန်မှာ ကမ္ဘာ့ဖလား ရပ်ဘီ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုတောင် အာဖရိကမှာ အိမ်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး တောင်အာဖရိကရပ်ဘီအသင်းကို ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်အောင် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးနိုင် ခဲ့ပါ တယ်။
လူဖြူ၊ လူမည်း ခွဲခြားမှု ပြဿနာ၊ မှုခင်းပေါ်များမှု စတဲ့အရာတွေကို သမ္မတဖြစ်လာပြီးချိန်မှာပဲ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလိုရင် ဆိုင်လာရချိန်မှာ မင်ဒဲလားကို အားဖြစ်စေခဲ့တာ ကတော့ အင်္ဂလိပ်ကဗျာဆရာ William Ernest Henley (၁၈၄၉-၁၉၀၃) ရေးသားထားခဲ့တဲ့ Invictus ကဗျာပဲဖြစ်ပါတယ်။ (ဒီကဗျာကို ဦးညိုမြက ဘာသာပြန်ပြီး သခင်အောင်ဆန်း အယ်ဒီတာလုပ်ခဲ့တဲ့ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း ၁၉၃၆ ခုနှစ် ထုတ်၊ အတွဲ၁ အမှတ် ၆ ၊ ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ အနိုင်မခံဆိုပြီး ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်)
မင်ဒဲ လားအနေနဲ့သမ္မတဖြစ်လာစအချိန်မှာ Invictus ကဗျာကို စိတ်စွမ်းအားအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပြီး
အခြားသူတွေကိုလည်း ကဗျာရဲ့အနှစ်သာရကို အသုံးချဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ Clint Eastwood က ရိုက် ကူးခဲ့ပြီး မင်ဒဲလားနေရာမှာ Morgan Freeman နဲ့ ရပ်ဘီးအသင်းရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်နေရာမှာ Matt Damon တို့က ပါဝင်သရုပ် ဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဖိအားများအောက်မှ ထိုးထွက်လာသော ယုံကြည်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
[FORMAT]:………………………….:[ 720p SD MP4
[GENRE]:………………………… .:[ Biography, Drama, History, Sport
[FILE SIZE]:……………………….:[ 865 MB
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[ 2h 14mins
Posted by Y Junction at 7:30:00 PM No comments:
Labels: Biography, Drama, History, Hollywood, Sport
IMDB 7.7 ထိရရှိနေဆဲ အချစ်ဟာသဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဟာသကားဆိုတာက တဟီဟီးရယ်နေရတဲ့ ဟာသမဟုတ်ပဲ သဘောကျလို့ ပြုံးမိရုံဖြစ်စေမှာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကိုတောင်ပြန်မြင်ယောင်နေမိလို့ ရင်ထဲစွဲတဲ့ဇာတ်ကားလေးတလက်လို့ပြောပါရစေ။ ရိုးရှင်းတဲ့လူနေမှုဘဝ၊မိသားစု၊ပတ်ဝန်းကျင်ကို အခြေခံထားတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ဇာတ်အိမ်လေးနဲ့တည်ဆောက်ထားပေမယ့် တင်ပြပုံနဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ဇာတ်ကားကောင်းတလက်အဖြစ် ရပ်တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုးကို မြန်မာကားတွေ ကိုရီးယားကားတွေမှာ မကြာခဏကြည့်ဖူးပေမယ့် တင်ပြပုံနဲ့ အိုင်ဒီယာကသူတို့ထက်ဘယ်လိုသာသွားလဲဆိုတာကိုတော့......
အမေရိကန် ဒါရိုက်တာ ရော့ဒ်ရိုင်နာက ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရော့ဒ်ရိုင်နာအနေနဲ့ ရှေ့မှာ Stand by Me (1986) နဲ့ The Bucket List (2007) ရိုက်ကူးခဲ့သူပါ။ အဲဒီ ဇာတ်ကား နှစ်ကားစလုံး အနှစ်သာရပြည့်ဝပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ဇာတ်ကားတွေအ ဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
Flipped ဇာတ်ကားက မပြသခင်ကတည်းက နာမည်ကျော်နေတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ပြည့်နှစ်ထဲမှာ ထွက်ရှိမယ့် အကောင်းဆုံးသော ဇာတ်ကားတွေထဲက ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ရုပ်ရှင်အကဲ ဖြတ်တွေက ကြိုတင်ဟောကိန်း ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
နေ့စဉ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဘဝတွေထဲက သာမန် အကြောင်းအရာတွေကို စွဲမက်ဖွယ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပြတတ်တာက ဒါရိုက်တာ ရော့ဒ်ရိုင်နာရဲ့ အရည်အသွေးတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ် Flipped ဇာတ်လမ်းကလည်း ရိုးစင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပဲ အခြေခံခဲ့တာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းကို စတင် အသက်သွင်းခဲ့သူက စာရေးဆရာမ ဝမ်ဒယ်လင် ဗန်ဒရာနန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးစာပေ အထူးပြု စာရေးဆရာမ တစ်ဦးအနေနဲ့ နာမည်ကျော်ပါတယ်။ သူက ဒီရုပ်ရှင်ဖြစ် လာမယ့် Flipped ဝတ္ထုကို ၂၀ဝ၁ခုနှစ်တုန်းက ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ စိတ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကို ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဗီဇရိုက်ခတ်မှုများနဲ့ ချိန်ထိုးပြဆိုခဲ့တဲ့ သာမန် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်ဘဝတွေထဲက အလှတရား ကို ရှာဖွေတတ်တဲ့ ဒါရိုက်တာ ရော့ဒ်ရိုင်နာ ကြောင့် Flipped ဝတ္ထုက ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ဂျူလီယာနာနဲ့ ဘရုစ် ဆိုတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို အသားပေး ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အသက်ခြောက်နှစ် အရွယ်ကတည်းက သူတို့နှစ်ဦး စတင် သိကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ အိမ်နီးနားချင်းတွေ လည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ စတွေ့စဉ်ကတည်းက ဂျူလီယာနာက ဘရုစ်ကို စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါ တယ်။ ဘရုစ်ကတော့ ဂျူလီယာနာကို စ တွေ့ကတည်းက စိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူး။
ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ခံစကား ပြောတွေနဲ့ ဇာတ်ကားကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုတည်း အပေါ်မှာပဲ မတူ ညီတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှု၊ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေရဲ့ နောက်ခံ အခင်းအကျင်းကိုလည်း ပြသပါတယ်။ ဘရုစ်က အရာရာကို အပေါ်ယံ တွေးတတ်တယ်။ ဂျူလီယာနာကကိစ္စရပ်တိုင်းကို အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ လေးနက်စွာ တွေးတော တတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကို ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဗီဇက ဘယ်လောက်အထိ ရိုက်ခတ်စေတယ်ဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားမှာ ပြသခဲ့ပါတယ်။
[FILE SIZE]:……………………….:[ 727 MB
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[ 1h 30mins
Posted by Y Junction at 8:34:00 PM 1 comment:
Labels: Comedy, Drama, Hollywood, Romance
စတက်ဖန်နီ ပလမ် ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်ဟာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာ အရေးပေါ်အလုပ်လုပ်ရတော့မယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီ။ သူ့အစ်ကိုဝမ်းကွဲဆီမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ ဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့လူတွေကို လိုက်ဖမ်းရတဲ့အလုပ်ပါ။ သူပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတော့ လူသတ်မှုတခုအတွက် ထွက်ပြေးနေတဲ့ ရဲအရာရှိဟောင်းကို လိုက်ဖမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူဖမ်းရမယ့်သူကတော့ တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ လူငယ်ဘဝတုန်းက ရည်းစားဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းဟောင်းလေးပါပဲ။ ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့....
မြန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ ဘလော့မှ ပြန်လည်ကူးယူ တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
[FORMAT]:………………………….:[ 1280p HDRip MP4
[FILE SIZE]:……………………….:[ 647 MB
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[ 1h 31mins
Posted by Y Junction at 1:47:00 AM No comments:
ဂျိမ်းစဘွန်းမင်းသားဟောင်း Pierce Brosnan ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ IMDB 7.2 အထိရထားတဲ့ Ghost Writer ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတကားတင်ပေးလိုက်ပြီ။
[FORMAT]:………………………….:[ 1280p DVDRip MP4
[GENRE]:………………………… .:[ Mystery, Thriller
[FILE SIZE]:……………………….:[ HD- 900 MB , SD- 227 MB
Posted by Y Junction at 3:31:00 AM 1 comment:
ညီငယ် မောင်ဦး ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ဂျက်ကီချန်း ဇာတ်ကားဟောင်းတကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဂျက်ကီ့အနေနဲ့ မိန်းမချောသုံးယောက်နဲ့အတူတူ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက နာဇီတွေရဲ့ ရွှေတွေကို သဲဂန္တရရထဲမှာ ရှာပုံတော်ဖွင့်ရတဲ့ဇာတ်ကားပါ။ ဂျက်ကီချန်းကားတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း အက်ရှင်ခန်းကောင်းကောင်းလေးတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဟာသနှောပြီး မိသားစုအတူတူ ကြည့်လို့ရမှာပါ။
[GENRE]:………………………… .: [ Action, Adventure, Comedy
[FILE SIZE]:……………………….:[ 868 MB
Posted by Y Junction at 8:19:00 PM9comments:
2016 ရဲ့ IMDB rating များများရထားတဲ့ ဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကားတကားတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘောလီးဝုဒ် အကျော်အမော် အာဖန်ခမ်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသည့် Madaari ဇာတ်ကားသည် ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး နောက် မကြာမီ အိန္ဒိယ ရူပီး ၅ ဒသမ ၇၅ ကုဋေ အထိ ရရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဇာတ်ကားသည် Box Office တွင်လည်း ထိပ်ဆုံးမှ ရပ်တည်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်း ဇာတ်ကားသည် ဖခင်နှင့် သားဖြစ်သူတို့ အကြား ထားရှိသည့် သံယောဇဉ်ကို ညွှန်းဖွဲ့၍ ဒါရိုက်တာ နီရှီကန့်ကာမတ်က ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းဇာတ်ကားတွင် မင်းသား အာဖန်ခမ်း အပြင် ဂျမ်မီရှာဂေးလ်၊ ဗီရှရ်ှဘန်ဆဲလ်၊ တူရှာဒဲလ်ဗီ၊ နီတီရ်ှပန်ဒီနှင့် အေရှာရာဇာ တို့က ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားကြောင်း သိရသည်။
IMDB 7.7 ရရှိနေဆဲ ၄င်းဇာတ်ကားသည် ပြသချိန် 2h:13mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 837 MB ဖြင့် အောက်ပါလိင့်ခ်တွင် ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 8:48:00 PM No comments:
Labels: Adventure, Bollywood, Crime, Drama
အမှုလိုက်တော်၊ အသတ်အပုတ်ကြမ်း၊ ခန္ဒာကိုယ်ထွားကြိုင်း၊ အရပ်ရှည်ပြီး ယောက်ျားပီသတဲ့ စုံထောက်ကြီးတယောက်ရဲ့ ဘာကြောင့်ဒေါက်ဖိနပ်စီးချင်ရသလဲ....
ခက်ထန်ပေမယ့် သံယောဉ်ဇဉ်ကြီးမားပြီး ကြင်နာတတ်တဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ဘယ်လိုဖေါ်ပြမလဲ...
သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ မိန်းကလေးကိုလည်း ပြန်ချစ်နိုင်ပါ့မလား...
ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးတာတော့ ညီငယ် Htoo Htoo Zaw ဖြစ်ပါတယ်။
IMDB 6.6 ရထားတဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကား 2h:05mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 555MB နဲ့ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 9:40:00 PM No comments:
Labels: Action, Comedy, Korea
မြန်မာနိုင်ငံကလူအများစုက ဒီဇာတ်ကားကိုမသိကြပါဘူး။ ၂၀၀၇ မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေကို ရိုက်ပြထားတဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဟာ အော်စကာဆု စကာတင် ၅ ကားအထိပါဝင်ခဲ့လို့ တော်တော်အောင်မြင်ပြီး လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ဘာသာပြန်ပြီး မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေကြည့်စေချင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိပါ။
Burma VJ ဇာတ်ကားသည် သည် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကာလတွင် နအဖစစ်အုပ်စုမှ ရဟန်းသံဃာတော်များနှင့် ကျောင်းသားပြည်သူတို့၏ ငြိမ်းချမ်းစွာတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့မှုများကို ရက်ရက်စက်စက်နှိပ်ကွပ်ခဲ့သည့် တကယ့်အဖြစ်အပျက်များကိုဇတ်ကားဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းရှိ ဗီဒီယိုဂျာနယ်လစ်တို့က သက်စွန့်ဆံဖျားမှတ်တမ်းတင်ကာ ပြည်ပသတင်းဌာနသို့ အခက်အခဲများကြားမှ ပေးပို့ခဲ့ပုံကို တင်ပြထားသည့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်အတွက် ရွေးချယ်ခဲ့သည့် (၈၂)ကြိမ်မြောက် အော်စကာဆုပေးပွဲတွင် နောက်ဆုံးဇကာတင် ဇာတ်ကား(၅)ကားတွင် တကားအဖြစ် စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံခဲ့သည်။ အော်စကာဆုမရရှိပေမယ့်လည်း လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်ဆု (ဘာလင်)၊ ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု အပါအဝင် နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ဆုပေါင်း (၄၁) ဆု ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ အဆိုပါဇာတ်ကားကို နော်ဝေနိုင်ငံအခြေစိုက် ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ(DVB)က စီစဉ်ခဲ့ဖြစ်ပြီး ဒိန်းမတ်လူမျိုးဒါရိုက်တာ Anders Ostergaard ကပြန်လည်တည်းဖြတ်ပေးခဲ့ကာ ထုတ်လုပ်သူမှာ Lise Lense-Mollerတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အညွှန်း - မောင်ရှင်(ဘားမားမီဒီယာသတင်းထောက်)
IMDB 8.0 ရနေဆဲ ၂၀၀၇ မြန်မာနိုင်ငံနောက်ခံ သတင်းရုပ်ရှင်ဟာ 1h:24mins ကြာမြင့်ပါတယ်။
400 MB နဲ့ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 9:21:00 AM6comments:
Labels: Documentary, History, Myanmar, News
အိန္ဒိယ တာမီးရုပ်ရှင် အချစ်ဟာသတကားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ နေရာတခုတည်းမှာ ရုံးအတူတူဖွင့်မိတဲ့ မတည့်အတူနေ ရှေ့နေနှစ်ယောက်အကြောင့်ပါ။ တဦးနဲ့ တဦး သံယောဇဉ်ရှိပေမယ့် အပြိုင်အဆိုင်စိတ်ဓါတ်တွေကြောင့် မနီးစပ်နိုင်ကြပါဘူး။ သူတို့နှစ်ဦး ပထမဦးဆုံး လက်ခံလိုက်တဲ့အမှုကတော့ ရွာတရွာက မြေကိစ္စ အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေကြရင်းနဲ့ တဖက်မှာလည်း လူသတ်ပြီး အကျင့်ပျက်ပြားနေတဲ့ ရဲမှူးတယောက်ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုအန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြရတဲ့အခါ....
IMDB 5.7 ရထားတဲ့ တာမီးဇာတ်ကားဟာ 2h:37mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 850 MB နဲ့ ဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 7:11:00 PM 1 comment:
ယခုလက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ပြည်မြို့မှာ ရုံတင်နေဆဲ ဒေါက်တာစထရိန်းကို flim2mm ရဲ့ admin ဖြစ်တဲ့ R!B မှ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုပြီး cam version နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ cam version ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ကွာလတီအကောင်းမဟုတ်ပါဘူး၊ အကြည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ သသေချာချာပြောပါရစေ။ ဒေါင်းပြီးမှ တောက်တခေါက်ခေါက်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့နော်။ နမူနာအနေနဲ့ screen short တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နောက်တချက်က ယခုနောက်ပိုင်း အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကြောင်း၊ ဆိုဒ်ကို ပြန်ပြင်ချင်နေတာကတကြောင်းကြောင့် ဇာတ်ကားတွေတင်တာတော်တော်ကြဲနေရပါတယ်။ ပုံမှန်ဇာတ်ကားတွေ ဝေဝေဆာဆာဖြစ်စေဖို့ ပြန်အားစိုက်ရပါဦးမယ်။ အဓိက အချိန်မပေးနိုင်တာကတော့ ဘာသာပြန်တာပါပဲ။ ပရိသတ်ထဲက ဝါသနာပါပြီး ဘာသာပြန်ဖို့ကူညီနိုင်မည့်သူရှိပါက cb ကတဆင့် ဆက်သွယ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်။ ယခုအခြေအနမှာ အက်ဒမင် ၂ယောက်၊ ကူညီသူ ၁ယောက် အလုပ်လုပ်နေတာအတွက်ကြောင့် လိုအပ်ချက်တော်တော်များများပါပဲ။ flim2mm မှာ bollywood ပရိသတ်အမြောက်အမြားရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် bollywood ကားတွေစိတ်ဝင်စားသူများလည်း ဘာသာပြန်လိုပါက cb မှတဆင့် အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်း....
Stephen Strange ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အတော်ဆုံး အာရုံကြောခွဲစိတ် ဆရာဝန်တစ်ယောက်။ မာနလည်းကြီးပြီး မောက်မာတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ ကား အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာအကြီးအကျယ်ရသွားတဲ့အတွက် လက်ဟာ အမြဲတုန်နေလို့ ခွဲစိတ်လို့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ စာသင်စားလို့ရပေမဲ့လည်း မာနကြီးတဲ့ Strange က သူ့လက်ပြန်ကောင်းအောင် ကမ္ဘာပတ်ပြီး နည်းလမ်းရှာပါတယ်။ အဲမှာတော့ Ancient One ဆိုတဲ့ မှော်ဆရာ တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ရာက မှော်အတတ်ကို သင်ကြားဖြစ်ခဲ့ပြီး Strange ဟာ ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံးနဲ့ အစွမ်းထက်ဆုံး မှော်ဆရာ Supreme Sorcerer Doctor Strange ဆိုတာဖြစ်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။
Marvel ရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ထွက်ရှိနေတဲ့ Marvel Cinematic Universe နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Infinity War တွေမှာလည်း ပါလာဖို့ရှိပါတယ်။ Doctor Strange အဖြစ် Sherlock Series နဲ့ နာမည်ကျော်တဲ့ Benedict Cumberbatch က သရုပ်ဆောင်ပြီး Scott Derrickson ကရိုက်ကူးပါတယ်။ Marvel Entertainment က ထုတ်လုပ်ပြီး Disney က ဖြန့်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Datshin
IMDB 8.0 ရရှိနေပြီး box office မှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ ဇာတ်ကားဟာ 1h:55mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 515 MB နဲ့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 3:38:00 AM4comments:
အသံသရုပ်ဆောင် ဒုံဂျူးဆိုတဲ့ ကောင်မလေးမှာ အထက်တန်းက တည်းက crush ဖြစ်နေတဲ့ ကောင်လေးရှိပါတယ်။ ၁၀ နှစ်လုံးလုံး တဖက်သက်ကြိုက်နေတဲ့ ဒုံဂျူးမှာ အားနည်းချက်တခုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ သူမ သီချင်းဆိုလိုက်တိုင်းမှာ အသံတလွဲ ဖြစ်နေပြီး နားထောင်တဲ့သူနားမခံနိုင်တာပါပဲ။
သူ့ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးရှေ့မှာ သီချင်းတပုဒ်ဆိုပြဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါ သူမရဲ့အသံကိုပြင်ဖို့ vocal training တက်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီသင်တန်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ သင်တန်းဆရာဟာ ညစ်တီးညစ်ပတ် ပေတီးပေစုတ် လူတယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အသံကောင်းပြီး စေတနာကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုံဂျူးအနေနဲ့ တပင်တိုင်သီချင်းကို အသံမှန်အောင်ဆိုနိုင်မလား၊ ဆရာက သူမကို ဘယ်လိုတွေလေ့ကျင့်ပေးမှာလဲ၊ သူမကြိုက်နေတဲ့ကောင်လေးကရော သူမကို ပြန်ကြိုက်မလားဆိုတာကိုတော့...
IMDB 5.9 ရထားတဲ့ ကိုရီးရား ဟာသအချစ်ဇာတ်ကားဟာ 2h:04mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 864 MB နဲ့ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 9:05:00 PM No comments:
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ၂၀၁၆ ထွက် ဘောလိဝုဒ်ကားကောင်းလေးပါပဲ...
ဒါရိုက်တာကလည်း နာမည်ကြီး GHAJINI(2008) ရဲ့ဒါရိုက်တာ၊
မင်းသမီးကလည်း ရက်ပါ၊သရုပ်ဆောင်၊ ဒီဇိုင်းနာ ဖြစ်တဲ့ Sonakshi Sinha....
ဗီလိန်ခေါင်းဆောင်ကလည်း သရုပ်ဆောင် ပီပြင်လွန်းတဲ့ Anurag Kashyap....
မြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အကြောင်းပါ...
ကိုယ့်ထင်ကြေးနဲ့ တစ်ခုပြီးတစ်ခု မှန်းဆရတာ မလွယ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ
မိန်းမငယ်တစ်ဦးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး..စမ်းသပ်ထားတာပါ...
.ကျွန်တော် ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ .... စဉ်းစားမိတာက...
ငါလည်း...သေဘေးနဲ့ကြုံရင် ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ တည်ငြိမ်အောင်လုပ်မလဲ....
လူကြီးအရွယ်အထိ အတွေ့အကြုံ အသိဉာဏ် မဖွံ့ဖြိုးသေးချိန်မှာ
အခက်အခဲတစ်ခုကို ဖြေရှင်းနိုင်လောက်တဲ့ ရင့်ကျက်စိတ်ထားရှိဖို့ မလွယ်ပါဘူး
သို့သော်...ရလာတဲ့ ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့နဲ့...ဆင်ခြင်တက်ဖို့ ပညာပေးတယ်လို့...
ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကို အသိပေးချင်တာက..."ဟာ" တို့.."ဟင်" တို့ အံသြသံ သက်ပြင်းချသံ များထွက်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်းပါတယ်.....အားမလို အားမရတွေလည်း ဖြစ်မယ်.....
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - R!B (Flim2mm.com)
မြန်မာဘာသာပြန် - R!B (Flim2mm.com)
IMDB - 6.1/10 ရထားတဲ့ဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကားဟာ 2h:17mins ကြာမြင့်ပါတယ်။
725 MB နဲ့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 3:34:00 AM2comments:
Labels: Action, Bollywood, Crime, Drama
2010တုန်းက နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားအက်ရှင်စီးရီးတွေထဲက ကားကောင်းတလက် ဖြစ်တဲ့ IRIS စပိုင် ဇာတ်ကားကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မင်းသားလီဗျောင်ဟွန်းအပြင် နာမည်ကြီးမင်းသား BigBang က အဆိုတော် Hyun Choi (TOP) လည်းပါဝင်တဲ့ အက်ရှင်ကားဟာ အက်ရှင်ဆိုပေမယ့် အချစ်အလွမ်းအကြမ်းရသတွေကို တခါတည်းခံစားရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။
IMDB 6.2 ရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားဟာ 2h:5mins ကြာမြင့်ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး - 968 MB
ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး - 477 MB
Posted by Y Junction at 9:13:00 PM3comments:
Labels: Action, Adventure, Drama, Korea
ဘုံဘေလမ်းမပေါ်က လူငယ်တယောက်၊ လမ်းဘေးဘဝကနေ မကောင်းမှုတွေလုပ်၊ ကြေးစားလူသတ်သမား ဖြစ်ပြီး ကလပ်ကကောင်မလေးတယောက်နဲ့ သံယောဇဉ်ဖြစ်၊ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ၊ အောင်မြင်မှာလား၊ ဒေါင်းယူ ကြည့်ရှုကြပါကုန်..
IMDB 5.7 ရထားပြီး မင်းသား Ranbir Kapoo ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားဟာ 2:29 mins ကြာမြင့်ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး - 349 MB
Posted by Y Junction at 8:31:00 AM No comments:
Labels: Bollywood, Crime, Drama, Thriller
သူ့တို့ရဲ့မြေကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်တယ်၊ သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရပြီးတဲ့နောက်၊ ကျန်တဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသား ဆယ်ကျော်သက်လူငယ် ၈ ယောက်ရဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပုံ၊ လက်တုံ့ပြန်ပုံ နဲ့ ကယ်ဆယ်ပုံတွေကို ဖေါ်ပြထားတဲ့ အက်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်။
IMDB 6.2 ရတဲ့ဇာတ်ကားဟာ 1h:43mins ကြာမြင့်ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး - 879 MB
ဖိုင်ဆိုဒ်အသေး - 436 MB
Posted by Y Junction at 9:42:00 AM No comments:
Posted by Y Junction at 10:29:00 PM No comments:
လော့အိန်ဂျလိစ်မြို့မှ အကြီးဆုံး သတင်းစာတိုက် ပိုင်ရှင်၏ အမွေဆက်ခံသူ သားဖြစ်သည့် Britt Reid (Seth Rogein )သည် ငွေကြေး ချမ်းသာသော်လည်း ဆိုးသွမ်း ပျက်စီးနေကာ ဦးတည်ချက် မရှိသည့် ဘ၀တွင် ပျော်မွေ့လျက်ရှိသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူ James Reid ( Tom Wilkinson ) ကွယ်လွန်သွားပြီး Britt သည် ကုမ္ပဏီမှ အစွမ်းအစရှိသော ၀န်ထမ်း Kato ( Jay Chou ) နှင့် တွေ့ရလေသည်။ ထို့နောက် Britt နှင့် Kato တို့(၂)ဦးသည် မိမိတို့တွင် ကိုယ်ပိုင်ဘ၀နှင့် ထိုက်တန် လျော်ညီသော အရာများ ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ရန် အစွမ်းအစ ရှိသည်ကို နားလည် သဘောပေါက်သွားပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ James Reid ၏ လွှမ်းမိုးနေသော အရိပ် အောက်မှ ထွက်လိုက်လေသည်။ Kato သည် အစွမ်းထက်လှသော လက်နက် တစ်မျိုး တီထွင် ကာ The Black Berry အမည်ရ အခြားသူတို့ဖျက်ဆီးရန် မလွယ်ကူသော ကားပေါ်တွင် စိတ်ကြိုက် လက်နက်မျိုးစုံ ထည့်သွင်း ထားသည်။ Britt သည်လည်း ၄င်းတို့အနေဖြင့် သူရဲကောင်း များဖြစ်လာရန် ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ ထို့နောက် တွင် Britt ၏ အတွင်းရေးမှူးသစ် Lenore Case ( Cameron Diaz ) ၏ အကူအညီဖြင့် မြို့ကို လွှမ်းမိုးထား သည့် လူဆိုး ဂိုဏ်ပေါင်းစုံ စုစည်းထားနိုင်သော အဓိက ရာဇ၀တ်ကောင် Benjamin Chudnofsky ( Christoph Waltz ) တို့အား ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြပုံကို ရိုက်ကူးထားသော အက်ရှင်ဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်ပါသည်။
အကြမ်အရမ်းတွေ ဂျိမ်းဘွန်းနည်းပညာတွေ နဲ့ ခပ်ဆန်းဆန်း ရိုက်ထားတဲ့အက်ရှင်ကား ကောင်းတစ်ကား ပါ ၊ ဟာသတွေနဲ့ သုံးထားတဲ့ လက်နက်တွေ မူဗီ Effect တွေကြောင့် ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ကားတစ်ကား ဆိုတာ သေချာပါတယ်
IMDB 5.8 ရထားတဲ့ဇာတ်ကားဟာ 1h:59mins ကြာမြင့်ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး - 615 MB
ဖိုင်းဆိုဒ်အသေး - 261 MB
Posted by Y Junction at 10:13:00 AM No comments:
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ အမေရိကန်အစိုးရက အထူးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ဆိုမာလီယာကိုလွှတ် ။ အစိုးရကို တည်ငြိမ်မှု ပျက်ပြားစေပြီး ငတ်မွတ်နေတဲ့လူထုအတွက် အစားအသောက်နဲ့ လူသားချင်းစာနာမှု အထောက်အကူပစ္စည်းတွေ ပေးပို့ကူညီခဲ့တဲ့ ၁၉၉၃ ကိုအခြေခံပါတယ်။ စစ်သားတွေကိုမြေပေါ်ကိုချဖို့ ဘလက်ဟော့ခ် ရဟတ်ယာဉ်တွေကို နှိမ့်ပျံပြီး ဆင်းသက်နေချိန်မှာ ဆိုမာလီယာတပ်ဖွဲ့တစ်ခုက မမျှော်လင့်ပဲ တိုက်ခိုက်ရာက ရဟတ်ယာဉ်နှစ်စီး ပျက်ကျခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီကစလို့ အမေရိကန်စစ်သားတွေဟာ ပြင်းထန်တဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်း ဘက်ညီမှုကို ရရှိဖို့ ပြန်လည်ကြိုးစားရပါတော့တယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Channel Myanmar
IMDB 7.7 ရနေဆဲ စစ်ကားဟာ 2h:24mins ကြာမြင့်ပါတယ်။
ဒေါင်းရန် ဆိုဒ်ကြီး - 833 MB
ဒေါင်းရန် ဆိုဒ်သေး - 292 MB
Posted by Y Junction at 9:43:00 AM No comments:
Labels: Drama, History, Hollywood, War
လူပုလေးတွေနေတဲ့ကျွှန်းပေါ်ထူးထူး ဆန်းဆန်းရောက်ရှိသွားတဲ့အကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့ စွန်းစားခန်း (Fantasy/Adventure) ရုပ်ရှင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းကို ပိုပြီးအားကောင်းအောင်လို့ ကျွန်တောတို့ရဲ့ ဟာသမင်းသားကြီး (Jack Black) က အားဖြည့်သရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ စာတိုက်ရုံးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ မင်းသား Jack Black ကတစ်နေ့တာ့ ဘာမြူဒါ တြိဂံ ကိုလေ့လာရေးခရီးထွက်တဲ့အခါမှာ မုန်တိုင်းမိပြီးတော့ လူပုလေးတွေနေတဲ့ကျွန်းကိုရောက်သွားတာ ပါ။ ပထမတော့ ရန်သူအဖြစ် ဆက်ဆံကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းလူပုလေးကျွန်းနှစ်ကျွှန်းတိုက်ပွဲကိုဝင်ရောက် ကူညီဖြစ်သွားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ကြည့်လို့တကယ်ကောင်းသလို ရီနေရမယ့် ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်တာ မို့ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - MM Movie House
IMDB 4.9 ရတဲ့ဟာသဇာတ်ကားဟာ 1h:25mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ် အကြီးအသေး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 5:53:00 AM No comments:
Labels: Adventure, Comedy, Family, Hollywood
ဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဒီကားကို ဟယ်ရီပေါ်တာ မင်းသမီး Emma Watson နဲ့ မင်းသား Daniel Brühl တို့ အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ...
တကယ်ပဲ လီနာဟာ သူ့ချစ်သူကို အဲ့ဒီ လူသားမဆန်တဲ့ နေရာကနေ ကယ်ထုတ်နိုင်မလား ... မကယ်ထုတ်နိုင်ဘူးလား ဆိုတာတော့ ဆက်ကြည့်ကြည့်ကြပါဦး
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - MMTV95
IMDB 7.1 အထိရထားတဲ့ ဇာတ်ကားဟာ 1h:50mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 928 MB နဲ့ အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 6:30:00 PM No comments:
Labels: Drama, Hollywood, Romance, Thriller
စိတ်စွမ်းအားရှင်ဆရာဝန် John Clancy က FBI အထူးအေးဂျင် Joe နဲ့အတူ အတွဲလိုက်လူသတ်သမား Charles Ambroseကိုလိုက်ရှာဖို့ အလုပ်အတူတွဲလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် သမီးဖြစ်သူသေဆုံးသွားပြီးကထဲက ၂နှစ်လောက်အထိ တဦးထဲနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ John ကို သူ့သူငယ်ချင်း Joeက ၎င်းကိုကူညီပြီး လူသတ်သမားကိုဖမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းကြောင့် Johnကကူညီခြင်းဖြစ်ပါတယ် ပြသနာက လူသတ်သမား Charles ကလဲ Johnလိုစိတ်စွမ်းအားရှင်တယောက်ဖြစ်နေတာပါပဲ။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Myanmar subtitle Movie an
IMDB 6.4 ရထားတဲ့ဇာတ်ကားဟာ 1h:41mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 776 MB နဲ့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 11:37:00 PM No comments:
Labels: Crime, Drama, Hollywood, Mystery
ဒီနေ့ တော့ ဘောလိဝုဒ်သည်းထိတ်ရင် ဖို မှုခင်းဇာတ်ကားသစ်လေးကို ပရိသတ်အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ တယ်။ ဇာတ်လမ်းက ရေတပ်ဗိုလ် မှူးကြီး ကေအမ်နာနာဗာတီနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ပရမ်အဟူ ဂျာတို့ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်း အရာတွေကို ရိုက်ကူးတင်ဆက် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်ကာလက အိန္ဒိယရေတပ်အရာရှိ ရပ်စတမ် ပပါဗရီဟာ စင်သီယာဆိုတဲ့ အမျိုး သမီးနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး တစ်ရက် မှာတော့ ဇနီးက သူ့သူငယ်ချင်း ဖြစ်တဲ့ ဗီကရမ်မာခီဂျာနဲ့ ဇာတ် လမ်းတွေ ရှုပ်နေတာ သိသွားပြီး ပြဿနာတွေ တက်ပါတော့တယ်။ရေတပ်ခရီးစဉ်ကနေ ရပ်စတမ်စောပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ စင်သီယာရဲ့ အံဆွဲထဲမှာ ဗီကရမ်ဆီက စာတွေရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အ တွက် စင်သီယာကို လိုက်ရှာတဲ့အ ခါ ဗီကရမ်နဲ့ တွဲခုတ်နေတာကိုပါ တွေ့ခဲ့ပါတော့တယ်။ နောက် တော့ ရပ်စတမ်ဟာ စစ်သင်္ဘော ပေါ်က လက်နက်တိုက်ကိုသွားပြီး ပစ္စတိုတစ်လက်ယူကာ ဗီကရမ် ရှိမယ့်နေရာကို လိုက်ရှာကာ ပစ္စ တိုနဲ့ ရှင်းပစ်ခဲ့ပြီးနောက် ရဲဌာနကို သွားပြီး အပြစ်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
ရေတပ်အရာရှိ ရပ်စတမ်တစ်ယောက် ဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်တွေကျခံရမှာ လဲ။ ဇနီးသည်နဲ့ကော ပြန်ပေါင်း ခွင့်ရပါ့ မလားဆိုတာ ကြည့်လိုက် ပါဦးနော်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်ထားသူတွေက ရေတပ်ဗိုလ်မှူး ကြီး ရပ်စတမ်ပါဗရီအဖြစ် အက် ရှေးကူးမား၊ စင်သီယာအဖြစ် အလီနာဒီခရုဇ်၊ ဗီခရမ်အဖြစ် အာ ဂျန်ဘာ့ဂ်ျဝါတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - 7DayDaily
IMDB 7.3 ရထားတဲ့ ဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကားဟာ Cam Version မျှသာထွက်သေးတာကြောင့် အကြည်ဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 2h:28mins ကြာမြင့်တာကြောင့် ဖိုင်ဆိုဒ် 952 MB ဖြစ်သွားပါတယ်။
Posted by Y Junction at 10:05:00 AM 1 comment:
Labels: Bollywood, Crime, Drama, Mystery
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော့် ဆိုဒ်က ဇာတ်ကားတွေရဲ့ ကွာလတီတွေက တကယ့် ကမောက်ကမတွေပါ။ ဆိုဒ်ကြီးပြီး ကွာလတီမကောင်းတဲ့ ပြသနာတွေအများကြီးပါ။ ဒါကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ နည်းပညာပိုင်း အားနည်းချက်ပါ။ ယခု ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော့်ကို လိုလိုလားလားကူညီတဲ့အစ်ကိုတဦး ပေါ်လာပါတယ်။ fb id ကတော့ အလွမ်းသံစဉ် ဖြစ်ပြီး ဝါသနာလျောက် လေ့လာသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ video encoding နဲ့ ပါတ်သတ်လို့ လမ်းညွှန်မှုတွေ တော်တော်ရလိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါအစ်ကို။ အခု John Wick ဇာတ်ကားကိုလည်း သူ့ရဲ့ PCloud ကနေတင်ပေးထားတာပါ။ မအားတဲ့ကြားက အားတတ်သရောကူညီပေးတဲ့ ကိုညီထွဋ် ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရင်း သူရှယ်ပေးပြီး သူအညွှန်းရေးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကို တင်ပေးလိုက်ပါရစေ။
သတ်​ဖြတ်​မှု​တွေကို အနားယူထားတဲ့ jhon wick တစ်​​ယောက်​ သူ့ရဲ့အမျိးသမီးဆုံသတာ ရက်​ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ သူ့မိန်းမ​သေခင်​​ပေးခဲ့တဲ့​ခွေး​လေးလည်း အသတ်​ခံရ သူံ့းအမြတ်​နိုးဆုံး ကားလည်းအခိုးခံရတဲ့အခါ သူ့ခံစားချက်​​တွေဘယ်​လိုဖြစ်​မလဲ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ကြည့်​ရှုရမယ့်​ ဇာတ်​ကား​တကားပါ၊ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုသူ မိုးစက်ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - ကိုညီထွဋ်
IMDB 7.2 အထိရနေဆဲ Keanu Reeves ရဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကြမ်းဟာ 1h:41mins ကြာမြင့်ပါတယ်၊ 867 MB နဲ့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 6:42:00 AM 1 comment:
အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်း ပန်ဂျပ်နယ်မှာ ကြွယ်ဝချမ်းသာကြသော်လည်း အဲ့ဒီနယ်ကလူငယ်တွေဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးပြသနာတွေနဲ့ လုံးလည်ချာလည် လိုက်နေကြတဲ့ လူငယ်တွေအများအပြားရှိနေတာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြလဲဆိုတာကို ရိုက်ကူးပြသထားတဲ့ Rating မြင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတကားဖြစ်ပါတယ်။
IMDB 8.0 ထိရရှိနေပြီး ပြသချိန် 2h:28mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 1GB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ကြပါပြီ။
Posted by Y Junction at 9:09:00 PM 1 comment:
ဟိုအရင်တုန်းကနာမည်ကြီး ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကောင်းတလက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 1978 ခုနှစ်လောက်က ဘရုစလီကို အားကျတဲ့ ကင်ဟွမ်းဆို ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတယောက်ဟာ ဂန်နမ်းက အထက်တန်းကျောင်းကို ကျောင်းသားသစ်အနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာပါတယ်။ ရိုးရိုးအေးအေး နေတတ်တဲ့ ကင်ဟွမ်းဆိုဟာ အဲ့ဒီခေါတ်အခါက ကိုရီးရား ပညာရေးစနစ်သစ်ပုံစံကြောင့် ပျက်စီးပြီး ဂိုဏ်းအဖွဲ့ပုံစံလိုလို စစ်တပ်ပုံစံလိုလို ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်နဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေ၊ဆရာတွေကြားမှာ ခက်ခက်ခဲခဲနေရပါတယ်။ အတန်းထဲက ဝူဆစ် ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားလူမိုက်နဲ့ အတွဲဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အွန်ဂျီဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့လည်း ခင်မင်ခဲ့ပါတယ်။ အွန်ဂျီကို အရမ်းကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့်လည်း ဝူဆစ်ကလည်း စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဝူဆစ်နဲ့ပါသွားပြီး... ကျောင်းသားလူမိုက်တွေကလည်း အနိုင်ကျင့်ဆိုတော့ နောက်ဆုံးမှာ ကင်ဟွမ်းဟာ သူအားကျတဲ့ ဘရုစလီလမ်းစဉ်အတိုင်း ဘယ်လိုတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့......
IMDB 7.5 အထိရထားတဲ့ ကျောင်းသားအချစ်ဇာတ်ကားဟာ 1h:56mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 873MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 10:30:00 PM No comments:
Labels: Drama, History, Korea
ချမ်းသာပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းရှိတဲ့ လူတယောက်ဟာ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိလှတဲ့ ကချေသည်မလေးကို မြင်မြင်ချင်း မေတ္တာသက်ဝင် စွဲလမ်းမိရာကနေ... အခြေအနေကွာဟတဲ့ သူနှစ်ဦးရဲ့ ရင်ခုန်စရာ အချစ်ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ပါ။
IMDB 5.3 ရတဲ့ဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်လမ်းဟာ 2h:7mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 950 MB နဲ့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 9:03:00 PM No comments: